AlwaysaBridesmaid (2019) | MM Movie Store
နှဈသဈမှာ RO မယျ့ ပရိသတျကွီးအတှကျ romance ကားလေးတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျဇာတျလမျးလေး ကတော့ သူငယျခငျြးမင်ျဂလာဆောငျတှမှော အမွဲတမျး သတိုးသမီးအရံလုပျပေးရတဲ့ကိုရီနာရဲ့အကွောငျးလေးပါ
သူငယျခငျြးတှတေဈယောကျပွီးတဈယောကျမင်ျဂလာဆောငျသှားတယျ သူကတော့ အပြိုကွီးဖွဈနတေုနျးပဲမင်ျဂလာဆောငျပှဲတှကေိုသှားရပမေယျ့လဲ သူကတော့မင်ျဂလာဆောငျရမှာကိုအရမျးကွောကျနခေဲ့ပါတယျအကွောငျးကတော့ သူ့အဖကွေောငျ့ပါ သူ့အဖကေ အရငျကအငယျနှောငျးထားခဲ့ပါတယျ
အရငျတဈခါကအသညျးကှဲဖူးအဲ့အပွငျ သူ့စိတျထဲမှာ သူ့အလှညျ့ကရြငျ သူယူမယျ့ယောကျြားက အဲ့လိုလုပျသှားရငျဆိုတဲ့အတှေးမြိုးနဲ့ မင်ျဂလာမဆောငျဘဲနနေတောပါ တဈနေ့ သူ့သူငယျခငျြးတှကေ အသကျ၂၉နှဈအရှယျ အပြိုကွီးဖွဈနတေဲ့သူမကို လကျတှဲဖျောရှာပေးမယျဆိုပွီး ဖုနျးထဲကို ဒိတျအပျဈ ကိုထညျ့သှငျးပေးခဲ့ပါတယျ….
အဲ့ဒီမှာ သူတကယျခဈြတဲ့ကောငျလေးနဲ့တှမေ့လား….တှခေဲ့ရငျရော ယခငျသံသယစိတျတှကွေောငျ့အဆငျပွပေ့ါမလား…. ရုပျရှငျခေါငျးစဉျအတိုငျးအမွဲတမျးသတိုးသမီးအရံပဲဖွဈနမေလား …
နှစ်သစ်မှာ RO မယ့် ပရိသတ်ကြီးအတွက် romance ကားလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေး ကတော့ သူငယ်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာ အမြဲတမ်း သတိုးသမီးအရံလုပ်ပေးရတဲ့ကိုရီနာရဲ့အကြောင်းလေးပါ
သူငယ်ချင်းတွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်မင်္ဂလာဆောင်သွားတယ် သူကတော့ အပျိုကြီးဖြစ်နေတုန်းပဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေကိုသွားရပေမယ့်လဲ သူကတော့မင်္ဂလာဆောင်ရမှာကိုအရမ်းကြောက်နေခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့ သူ့အဖေကြောင့်ပါ သူ့အဖေက အရင်ကအငယ်နှောင်းထားခဲ့ပါတယ်
အရင်တစ်ခါကအသည်းကွဲဖူးအဲ့အပြင် သူ့စိတ်ထဲမှာ သူ့အလှည့်ကျရင် သူယူမယ့်ယောက်ျားက အဲ့လိုလုပ်သွားရင်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့ မင်္ဂလာမဆောင်ဘဲနေနေတာပါ တစ်နေ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက အသက်၂၉နှစ်အရွယ် အပျိုကြီးဖြစ်နေတဲ့သူမကို လက်တွဲဖော်ရှာပေးမယ်ဆိုပြီး ဖုန်းထဲကို ဒိတ်အပ်စ် ကိုထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်….
အဲ့ဒီမှာ သူတကယ်ချစ်တဲ့ကောင်လေးနဲ့တွေ့မလား….တွေ့ခဲ့ရင်ရော ယခင်သံသယစိတ်တွေကြောင့်အဆင်ပြေပ့ါမလား…. ရုပ်ရှင်ခေါင်းစဉ်အတိုင်းအမြဲတမ်းသတိုးသမီးအရံပဲဖြစ်နေမလား …